Inkampani ibambe umsitho wokuvula uqeqesho lwabasebenzi abatsha ngo-2021
Ngenjikalanga ye-20 ka-Agasti 2021, inkampani yabamba umsitho omtsha woqeqesho lwabasebenzi kwigumbi lenkomfa le-312. Intlanganiso yayiphethwe nguFang Jiaqin, uMphathi Jikelele uLi Dong, uQi Jifei, uSekela-General Manager, iintloko zamasebe ahlukeneyo, umsebenzi omtsha...
Isitshixo sokusombulula ingxolo ezisixhenxe ezinkulu ngaphakathi kwesekethe(7)
7. Ingxolo yesekethe edibeneyo Kukho iintlobo ezimbini zokuphazamiseka kwengxolo kwiisekethe ezidibeneyo: enye i-radiated kwaye enye i-conductive. Ezi spikes zengxolo zinokuba nempembelelo enkulu kwezinye izixhobo zombane eziqhagamshelwe kwigridi ye-AC efanayo. I-spectrum yengxolo yandiswe ngaphezu kwe-1...
Isitshixo sokusombulula ingxolo ezisixhenxe ezinkulu ngaphakathi kwesekethe(6)
6. Ingxolo ye-resistor Ukuchasana kwe-resistor ivela kwi-inductance kwi-resistor, i-capacitive effect, kunye nesandi se-thermal ye-resistor ngokwayo. Umzekelo, isixhasi esiluqilima esinexabiso lokuchasa le-R sinokulingana noqhagamshelo oluhambelanayo lwe-resistor...
Isitshixo sokusombulula ingxolo ezisixhenxe ezinkulu ngaphakathi kwesekethe(5)
5. Ingxolo ye-Transistor Ingxolo ye-transistor ikakhulu ibandakanya ingxolo ye-thermal, ingxolo yokudubula, kunye ne-flicker ingxolo. Ingxolo ye-thermal ibangelwa ukunyanzeliswa kwe-thermal ye-thermal ye-carriers edlula ukuchasana komzimba wemimandla emithathu kwi-BJT kunye ne-lead resistance resistance. Th...
Isitshixo sokusombulula ingxolo ezisixhenxe ezinkulu ngaphakathi kwesekethe(4)
4. Ukuphazamiseka kwamacandelo e-electromagnetic kwibhodi yesekethe Iibhodi ezininzi zeesekethe zineenxalenye ze-electromagnetic ezifana ne-relays kunye neekhoyili. Xa i-current idlula, i-inductance ye-coil kunye ne-capacitance esasazwayo ye-casing yangaphandle ikhupha amandla kwiindawo ezingqongileyo, kunye ne-ener ...
Isitshixo sokusombulula ingxolo ezisixhenxe ezinkulu ngaphakathi kwesekethe(3)
3. Ingxolo ephezulu yobushushu Ingxolo ephezulu ye-thermal Ingxolo ephezulu ye-thermal ibangelwa yintshukumo engaqhelekanga yee-electron ngaphakathi kwe-conductor. Okukhona ubushushu buphezulu, kokukhona intshukumo ye-elektroniki iya kuba namandla. Ukushukuma okungacwangciswanga kwee-electron ngaphakathi kwe-conductor kudala i-fluctu encinci yangoku ...
Isitshixo sokusombulula ingxolo ezisixhenxe ezinkulu ngaphakathi kwesekethe(2)
2. Ingxolo yokudubula eyenziwe zizixhobo ze-semiconductor Isixa sentlawulo eqokelelwe kulo mmandla sitshintsha ngenxa yokutshintsha kwamandla ombane wommandla wesithintelo kwi-junction ye-semiconductor ye-PN, ngaloo ndlela ibonisa umphumo we-capacitive. Xa amandla ombane asetyenzisiweyo angaphambili anyuka, ii-elektroni ezikwi ...
Isitshixo sokusombulula ingxolo ezisixhenxe ezinkulu ngaphakathi kwesekethe(1)
ngu admin on 21-08-16
1. Ingxolo ephantsi ephantsi Ingxolo ephantsi yomsindo ibangelwa ikakhulu kukungaqhubeki kwamasuntswana angaphakathi okuqhuba. Ngokukodwa, i-carbon film resistor inamancinci amancinci amaninzi ngaphakathi kwe-carbonaceous material, kwaye iinqununu ziyeke. Xa umsinga uhamba, umbane ...
Isitshixo sokusombulula ingxolo ezisixhenxe ezinkulu ngaphakathi kwesekethe
Uyilo lwesekethe luyinto ephambili ekusebenzeni okuphezulu kwenzwa. Ekubeni isiphumo senzwa sisignali encinci kakhulu, ukuba isibonakaliso esiluncedo sigxininiswe yingxolo, ayiyi kufaneleka ilahleko, ngoko kubaluleke kakhulu ukuqinisa i-anti-jamming design yesekethe ye-sensor. ...
Imiba yomgaqo-nkqubo: i-smart sensor industry yeminyaka emithathu iya kwaziswa
Kwinqanaba eliqhutywa ngumgaqo-nkqubo, uGuoYuansheng wazisa ukuba "iSicwangciso seMinyaka emiHlanu ye-13" idwelise izinzwa eziphambili njengengqwalasela yophuhliso lweqhinga. Okulandelayo, iSebe lezoShishino kunye neTekhnoloji yoLwazi "IsiKhokelo seMinyaka emithathu yeSensor Sensor (2017-2019)" siya kwaziswa ...
Ingeniso yonyaka yeMediaTek iya kudlula i-10 yeebhiliyoni zeedola zaseMelika okokuqala ngqa ngo-2020
Usihlalo weMediaTek uCai Mingjie wawongwa ngeMbasa yeMpumelelo eBalaseleyo kwisikhumbuzo seminyaka engama-40 kaZhuke. Kwintetho yakhe, uTsai Mingjie uthe isikhumbuzo seminyaka engama-40 sokusekwa kukaZhuke, apho uZhuke ebejongene nemiceli mngeni eyahlukeneyo, kulo nyaka, iSemiconducto yaseChina yaseTaiwan...
Inani elikhulu labenzi boluvo kwimoto yomfuziselo we-Apple oziqhubayo
Ngomhla we-11 kaNovemba ka-2020, i-chip ye-Apple ezenzele yona uM1 yatyhilwa ngokusemthethweni. Le chip ye-M1 luphawu lokwandiswa kwe-Apple ukusuka kwintsimi yeefowuni eziphathwayo ukuya kwiindawo ngaphandle kweefowuni eziphathwayo. Le chip ingasetyenziswa kwii-cockpits zemoto kunye nokuqhuba okungaqhutywanga ngokuguqulwa okuncinci. IApple iye...
Hall Effect inzwa yangoku, I-Hall Effect Ac inzwa yangoku, Ukuchaneka okuphezulu kweSensor yangoku ye-Ac, IHolo Yoluvo lwangoku, Ukusetyenziswa kwamandla aphantsi kwe-Dc yangoku yoVavanyo, I-Voltage yangoku yoVavanyo,